Xoogag Jihaadi ah oo Weerar 53 Askari lagu dilay ka fuliyay Waqooyiga dalka Maali.
Saturday November 02, 2019 - 12:13:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara lixaad leh ayaa ciidanka dowladda Maali kasoo gaaray weerar xoog kugal ah oo dagaalyahanno mujaahidiin ah ay ka fuliyeen saldhig melleteri oo kuyaal waqooyiga wadankaasi.
Weerar aad u xooggan oo dagaalyahannada Jihaadiga Jamaacada ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ay ka fuliyeen saldhigga melleteri ee degmada Indeleman oo dhacda waqooyi Maali ayaa sababay dhimashada ku dhowaad 60 askari.
Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska in xoogag aad u hubeysan ay dhowr jiho ka weerareen saldhigga waxaana goobta ka dhacay dagaal saacado badan qaatay oo khasaara culus lagu gaarsiiyay Melleteriga xukuumadda Bomako.
Taliye ku xigeenka ciidanka qalabka sida ee Maali ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamo xoojin ah oo ay udireen saldhigga weerarku ka dhacay ay soo aruuriyeen Meyadka 53 askari "Ciidamo gumarkad ah oo aan dirnay ayaa baacsanaya argagaxisadii weerarka qaadday waxayna ku guuleysteen in ay soo aruuriyaan meydadka 53 askari" ayuu yiri mas'uul u hadlay melleteriga Maali
Yaya Sangari oo ah wasiirka Isgaarsiinta dowladda Maali ayaa magaalada Bomako ka sheegay in musiibo ay gaartay ciidamadooda ayna ku dadaalayaan sidii ay ubaacsan lahaayeen xoogaga jihaadiga ah ee weerarka geystay.
Saraakiisha ammaanka ayaa aaminsan in weerarkan ay geysteen xoogag taabacsan jamaacada Ugagaaridda Islaamka iyo muslimiinta oo ah Faraca Al Qaacidda ee wadamada Saaxilka qaaradda Afrika.
30,Septembar 2019 ayay xoogaga Al Qaacidda sidaan oo kale cagta umariyeen saldhig melleteri oo kuyaal xuduud beenaadka ay wadaagaan Maali iyo Burkina Faso waxaana ku dhintay tobanaan askar iyo saraakiil ah.